1WorldSync: Ulwazi lweMveliso ethembekileyo kunye noLawulo lweDatha | Martech Zone
1WorldSync: Ulwazi lweMveliso eThenjwayo kunye noLawulo lweDatha
NgoLwesibini, Oktobha 11, 2016 NgoMvulo, Februwari 13, 2017 Douglas Karr
Njengoko intengiso ye-ecommerce iqhubeka ikhula ngesantya esothusayo, inani leziteshi ezinokuthengisa kuzo likhulile. Ubukho babathengisi kwii -apps zeselfowuni, amaqonga eendaba ezentlalo, iiwebhsayithi ze-e-commerce nakwiivenkile ezibonakalayo zibonelela ngeendlela ezininzi zokufumana ingeniso ezinokuthi zibandakanye abathengi.
Ngelixa oku kuzisa ithuba elikhulu, ukuxhobisa abathengi ukuba bathenge iimveliso nangaliphi na ixesha naphina, ikwadala imiceli mngeni emininzi kubathengisi ekuqinisekiseni ukuba ulwazi ngemveliso luchanekile, lukwizinga eliphezulu, kwaye aluhambelani kuzo zonke ezo ndlela. Umxholo okwinqanaba eliphantsi unciphisa ukujonga uphawu, ukonakalisa indlela yokuthenga, kwaye unokubabuyisela kude abathengi ebomini.
Oku kubangela umngeni okhethekileyo kubathengisi ngokunjalo. Ukuba iimveliso zikhomba abantu ukuba azimelwe kakuhle kumajelo onke, iinzame ziyachitheka. Nawaphi na amanyathelo okuthengisa kufuneka afake umxholo okwinqanaba eliphezulu, oluchanekileyo ukugcina ubukho obungaguquguqukiyo kuyo yonke indawo yedijithali.
Ke, banokwenza ntoni abathengisi kunye nabathengisi?
Faka into ekugxilwe kuyo ekudaleni umxholo wemveliso ekumgangatho ophezulu kwisicwangciso seshishini ngokubanzi
Gcina imali ekumgangatho ophezulu wedatha kunye neenkqubo zolawulo lweenkcukacha zemveliso
Khangela izisombululo zedatha ezikala ngokulula njengoko itekhnoloji entsha kunye namajelo ephuhlisiwe
Sebenza nababoneleli ngedatha abenza ukuba ukufumaneka kwemveliso kube namandla okwandisa ukwanda kwemveliso
1WorldSync Isisombululo sesisombululo
1YokuSync ngowona mnatha ukhokelayo kwimveliso, unceda, ngaphezu kwama-23,000 eemveliso zehlabathi kunye namaqabane abo kurhwebo kumazwe angama-60 - babelana ngokunyanisekileyo, ngomxholo wokuthembela kunye nabathengi kunye nabathengi-ebanika amandla okwenza ukhetho olufanelekileyo, ukuthenga, impilo kunye nezigqibo zokuphila. Ngabathengi kuyo yonke iFortune 500, i-1WorldSync ibonelela ngezisombululo zoluhlu olwandisiweyo lweemarike, ukusuka kwiinkampani zeFortune 500 ukuya kumashishini amancinci naphakathi (ii-SMB).
Inkampani ineeofisi eMelika, eAsia Pacific naseYurophu, kwaye iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zolwazi lwemveliso zalo naliphi na iqabane lezorhwebo kulo naliphi na ishishini, elidibanisa ukufikelela kwihlabathi kunye nolwazi lwasekhaya kunye nenkxaso. Inkampani inezisombululo ezifumanekayo kwiinkampani kuwo onke amabakala olwazi ngemveliso kunye nolawulo lwedatha.
Njengabathengi bazibandakanya neenkampani ngakumbi nangakumbi kwi-Intanethi, bafuna imifanekiso esemgangathweni ophezulu, umxholo kunye nokunye okuvela kwiimpawu. Izisombululo zethu ezikhokelela kwintengiso zivumela iinkampani kuwo onke amabakala enkqubo yokuthenga ukulawula okungcono kolwazi lwemveliso yabo, ekugqibeleni kukhokelela kumava abathengi ngakumbi kunye nokuthengisa okuphezulu. UDan Wilkinson, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo le-1WorldSync
1WorldSync Iimpawu zaBamkeli:
Ukuseta into kunye nokugcinwa
Ukufunyanwa komxholo weMveliso
Ukuzibandakanya kwabahlali kunye nokwenza ukuba kube lula
Umdibaniso womxholo wehlabathi
Iimpawu ze1WorldSync zeMithombo:
Ukuhanjiswa komxholo wehlabathi
Umxholo wokubamba kunye nokucebisa
Ulwazi lolawulo lwemveliso
tags: 1kuyeuthenge ii -apps ezisecaleniumxholo wokubambaukuhanjiswa komxholoukucebisa ngomxholoUmxholo we-ecommerceUmdibaniso womxholo wehlabathiikhathalogu ye-omnichannelUmxholo wemvelisoukufunyanwa komxholo wemvelisoUlwazi lwemvelisoUlwazi lolawulo lwemvelisoulondolozo lwemvelisoukuseta imvelisothengisa ii -apps ezisecaleni
Kutheni i-infographics isisiseko saso nasiphi na iSicwangciso se-SEO
ImeyileButler: Okokugqibela, uMncedisi weApple Mail leyo Rocks!